Ọmụmaatụ nke Mwepụta-Ebumnobi Mmapụta ga-emeziwanye ọnụego ngbanwe gị | Martech Zone
Ọmụmaatụ nke Mwepụta-Ebumnobi Ọpụpụ nke ga-eme ka ọnụego mgbanwe gị ka mma
Monday, July 20, 2020 Wenezdee, Machị 30, 2022 Ugljesa Djuric
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa, ị maara na ikpughe ụzọ ọhụrụ na ụzọ dị irè iji meziwanye ọnụego mgbanwe bụ otu ọrụ kachasị mkpa.
Ikekwe ị naghị ahụ ya n'ụzọ ahụ na mbụ, mana ọpụpụ-ebumnuche mmapụta nwere ike ịbụ ezigbo azịza ị na-achọ.
Gịnị mere o ji dị otú ahụ na otú i kwesịrị isi jiri ha mee ihe n’ihu gị? Ị ga-achọpụta na nke abụọ.
Kedu ihe bụ Mpụpụta Ebumnuche
E nwere ọtụtụ windo mmapụta dị iche iche, mana ndị a bụ ụfọdụ n’ime ndị a kacha eji:
Nke ọ bụla n'ime ha nwere uru nke ya, ma ugbu a, anyị ga-akọwa ihe kpatara mpụ-ebumnobi mmapụta nwere nnukwu ikike iji mee ka azụmahịa gị gaa n'ọkwa ịga nke ọma dị elu.
Wepu-nzube mmapụta bụ, dị ka aha ahụ na-ekwu n'onwe ya, windo na-apụta mgbe onye ọbịa chọrọ ịpụ na weebụsaịtị.
Tupu onye ọbịa ahụ atụ aka na bọtịnụ iji mechie taabụ nchọgharị ma ọ bụ mpio, windo mmapụta ọpụpụ na-egosi. Ọ na-enye onyinye a na-apụghị ịgbagha agbagha nke dọtara mmasị onye ọbịa ma na-agba ha ume ime ihe.
Ndị a mmapụta gbasie ọrụ dabere na a smart ụzọ ọpụpụ-nzube technology na-amata ụzọ ọpụpụ nzube na-akpali a mmapụta.
Gịnịkwa mere ha ji dị mkpa?
Ha dị mkpa n'ihi na ị nwere ike iji ha gbochie ịlanarị onye na-azụ ahịa ọzọ!
Site n’igosi ụfọdụ onyinye dị oke ọnụ, ndị mmadụ nwere ike ịmalite ịgbanwe obi ha ma mezuo ebumnuche ị setịpụrụ.
Ma onyinye ahụ bụ gbasara ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ nke ha nwere ike nweta site na mgbasa ozi email gị ma ọ bụ mbelata maka ịzụrụ ngwa ngwa, ị nwere ike ịnwale ma mee ka ndị mmadụ kwenye ịnakwere ya.
N'ezie, enwere ụfọdụ ihe ị ga - etinye n'ọrụ dịka:
Anya na-adọrọ adọrọ
Ejiri amamihe enye onyinye
Tinyere bọtịnụ CTA (oku na-eme)
Nke a nwere ike ịdị ka ọtụtụ ihe ị ga-eche n'echiche, mana anyị ga-egosi gị ụfọdụ omume kacha mma ị kwesịrị ịgbaso ma jiri dabere na weebụsaịtị gị yana azụmahịa gị n'ozuzu.
Hụ The Infographic: Gịnị bụ Ọpụpụ ebumnobi?
Omume kacha mma nke mbupụ-ebumnuche mmapụta
Iji ghọta omume omume mmapụta ọfụma ka mma, anyị ga-eji anya nke uche hụ ha site na iji ihe atụ kwesịrị ekwesị sitere na weebụsaịtị dị iche iche.
Ihe Nlereanya 1: Nye ọdịnaya bara uru
Inye mpempe akwụkwọ bara uru bụ ezigbo echiche mgbe niile. Mgbe ị matara otu ịchọrọ, ị nwere ike ịkwadebe ọdịnaya na-atọ ha ụtọ.
Ndị a nwere ike ịbụ:
Ọ ga-adịrị gị mfe ịmepụta ihe na-agaghị ekwe omume mgbe ị nyochachara nke ọma ọdịmma nke ndị mmadụ ịchọrọ ịtụgharị gaa na ndị na-azụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Na mgbanwe, ha ga-eji obi ụtọ hapụ ozi email ha n'ihi na "ọnụahịa ahụ dị ala".
Mgbe ị chịkọtara kọntaktị ma tinye ha na listi nzipu ozi gị, ị nwere ike gbasaa mmata ma banye na ndị ahịa gị n'ọdịnihu.
Ma echefula na ị ghaghị imezu ihe ndị a tụrụ anya ya, ma ọ bụghị ya, ndị debanyere aha gị ga-emechu ihu na ha agaghị alaghachi azụ.
Gosi ha na izi ezi gi na o ziri ezi.
Nke a bụ ihe atụ si Usoro:
Ihe: Coschedule guzobere windo mmapụta ọpụpụ ebe ndị ọbịa nwere ike ịnakọta ụfọdụ ọdịnaya bara uru. Dịka anyị pụrụ ịhụ, ha jikwa akọ kwuo na ha na-enye kalịnda na akwụkwọ ntanetị, naanị ị kwesịrị ịpị Nweta ya ugbu a bọtịnụ iji nata ha.
Design: Imepụta dị mfe, mana ya na agba agba na-adọta uche. Foto ndị dị n’elu ederede ahụ bụ ihe akaebe na ọdịnaya na-eche ha, ya bụ, nkwenye ha.
Detuo: Na nkwukọrịta ndụ, Tupu ị gaa… n'ezie na-akpali ndị mmadụ ka ha kwụsị ma tụgharịa tupu ha apụ n'ezie, a na-ejikwa ya mee ihe n'ụzọ amamihe dị na ya.
Nye: Onyinye yiri ka ọ na-anabata. Tinyere okwu plan na hazie na-enyere aka na-akpakọrịta dum enye na mma arụpụtaghị na oge arụmọrụ.
Ihe Nlereanya 2: Nye ngosi ngosi ndụ
Ngosipụta bụ ụzọ dị mma iji kpọtụrụ ndị ọbịa gị.
Ma eleghị anya, ikpo okwu gị yiri ka ọ dị mgbagwoju anya na ọ bụ ya mere onye ọbịa ji chọọ ịpụ na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ụfọdụ, ị ga-enwe ike ịkọwapụta n'ụzọ dị mfe karịa otu esi kwesịrị iji ya, uru ya, na ihe ndị yiri ya.
Ngosipụta ndụ bụ nhọrọ ka mma n'ihi na ihe niile na-eme na oge na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịhụ mmelite na ozi niile.
Lee otú Zendesk jiri nke a na windo mmapụta ha na-apụ:
Ihe: Dị ka Zendesk bụ sọftụwia nkwado nkwado ndị ahịa, mmapụta a bụ ụzọ dị mma iji soro ndị ahịa ha nwere ike ịmalite nkwukọrịta.
Design: Agụnyere ihe ndị mmadụ na-eme, nke na-enyere ndị mmadụ aka ijikọ na azụmahịa gị.
Nye: Ngosipụta bụ onyinye dị ukwuu n’ihi na ikpo okwu a na-ekwe nkwa ihe ga-enyere gị aka ịme azụmahịa gị ọfụma. Ma, nke kachasị mkpa bụ na nkwa ha na-amalite imezu n'oge ahụ, ị ​​bidoro ịnata enyemaka ozugbo.
Detuo: Akwụkwọ a nwere ụda olu na-ekpo ọkụ nke dị mma maka iwulite njikọ siri ike na ndị ahịa. Ọzọ aka, ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ peeji nke na- nọ na nrụzi, ị na-adịghị mkpa ichere ka imecha ha iji malite na-ahịa na-eduga na ya.
I nwekwara ike itinye popup gị na na-abịa oge adịghị anya peeji nke ma bido mefu ahihia ahia gi.
Ihe Nlereanya 3: Kwuo banyere Mbupu n'efu
Ebufe mbupu n'efu na-ada ka nkebi okwu anwansi maka onye chọrọ ịzụrụ gị.
I kwesịrị ịma na ndị mmadụ anaghị achọ ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ọ bụla. Ha ga-akwụ ụgwọ karịa maka ihe karịa ịkwụ ụgwọ ego maka mbupu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike belata ọnụahịa mbupu, ọ ka mma itinye ha na ọnụahịa dị mkpa karịa itinye ya na ụlọ ahịa gị iche.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n’inwere ike ịnye ndị ahịa gị mbupu n'efu, ị ga-emerịrị ya. Ahịa gị ga-amalite ịba ụba na obere oge.
Nke a bụ ihe atụ si Brooklinen:
Ihe: Brooklinen bụ ụlọ ọrụ na-ere akwa, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na anyị nwere ike ịhụ akwa akwa akwa dị mma na mmapụta.
Design: White ndabere, akwụkwọ edemede ojii. Ma, ọ dị nfe ahụ? Mpempe akwụkwọ dị na foto dị n’azụ na-adị ka nke ahụ na ebumnuche. Ha dị ka mmadụ si n’elu akwa ọma biliri ọtọ. Ọ dị ka ha na-anwa ịrata anyị ka anyị zụta akwa akwụkwọ ndị a, nke na-adọrọ adọrọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị mgbe mmapụta a gosipụtara.
Nye: Onyinye doro anya nke ọma ma ọ dị oke irè.
Detuo: Enweghị okwu na-enweghị isi, dị ọcha ma doo anya.
Ihe Nlereanya 4: Kpọọ ndị mmadụ ka ha denye aha ha maka akwụkwọ akụkọ
Akwụkwọ akụkọ bụ ụdị ọdịnaya bara uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịmee nnukwu ebe mmadụ nwere ike ịgwa ya gbasara ihe dị mkpa ma ghara iche na a na-akpali ha ịzụta ihe n'aka gị.
Ọ ga - enyere gị aka ijikọ ndị ahịa gị.
Ninggba ọsọ akwụkwọ akụkọ pụtara na ị kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe ka ha wee mara kpọmkwem oge ịtụ anya ozi ọhụrụ n'aka gị.
Nke a bụ otu esi GQ emejuputa nke a na ha windo mmapụta:
Ihe: GQ bu akwukwo ndi mmadu dere banyere ndu, ejiji, njem, na ihe ndi ozo.
Design: Ọzọkwa, a na-esonye ihe mmadụ mejupụtara. Obere ihe ọchị na foto a na ihe ndị ọzọ nke mmapụta ahụ dị mfe, nke na-eme nnukwu nchikota.
Nye: Ha na-enye ndumodu na ndu nwere ike inyere ndi nwoke aka ka ha mara mma, naani ihe ha kwesiri ime bu ihapu njiko ha.
Detuo: A na-eme ka akụkụ kachasị mkpa pụta ìhè, yabụ ndị ọbịa anaghịdị agụ ihe ọ bụla belụsọ ederede edere na nnukwu font, ebe ọ na-enye ozi zuru oke.
Ihe Nlereanya 5: Nye ego
Ego na-agba ume mgbe niile. Mgbe ị gbakwunye ha ka ị pụọ-ebumnuche mmapụta, ha nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ego gị.
Ego ole ego a ga - adị, dabere naanị gị. Ọbụna obere ihe mkpali nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ ahịa.
Storesfọdụ ụlọ ahịa na-enye ego mgbe niile n'ihi na ọ ghọrọ omume dị ike n'ezie.
Ọbụna saịtị e-azụmahịa kacha ewu ewu na-eji mbelata ebumnuche ọpụpụ dị ka ụzọ isi dọta uche ndị ọbịa. Nke a bụ ọmụmaatụ sitere na saịtị ebe ị nwere ike zụta uwe n'ịntanetị, ihe a na-enye bụ 15% kwụsịrị ma ọ bụrụ na ị debanyere aha maka ahịa email ha.
Ihe: Revolve bụ ebe nrụọrụ weebụ nwere uwe nwere nnukwu nhọrọ nke ngwaahịa, yabụ ịbelata ego nwere ike ịgba ndị mmadụ ume ịzụrụ ọtụtụ ihe n'ebumnuche nke ịchekwa ego n'ezie.
Design: Anyị nwere ike ịhụ na ịgbakwunye ihe mmadụ bụ ọrụ nkịtị. Mmapụta a nwere ụdị klaasị nwere bọtịnụ CTA dị iche.
Nye: Ha na-enye mbelata 10% ma nyere gị aka ịchekwa oge site na ịhọrọ otu n'ime ụzọ atọ enyere.
Detuo: Direct adreesị bụ ike n'ụzọ na-adọta ndị ahịa 'ntị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ echiche banyere otu ị ga - esi jiri mmapụta ọpụpụ ebumnuche mee ka ọ baara gị uru wee wulite ntụkwasị obi na ndị ahịa gị.
Nwere ike igwu egwu na imepụta, detuo, ma tinye onyinye dị iche iche nke ga-adọta uche ndị ọbịa gị ma mee ka ntụgharị gị dịkwuo elu.
O doro anya na ọ bụ obere mgbalị ma e jiri ya tụnyere ihe ụdị mmapụta ga-eme maka azụmaahịa gị.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, iji ya nwere ike ịbụ ọbụna mfe n'ihi na taa enwere ngwaọrụ ndị nwere ike inyere gị aka ịmepụta mmapụta dị mma na-erughị nkeji 5.
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ dịka Privy na 'uzo ozo nke ahụ ga - enyere gị aka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị. Site na ịdọrọ na dobe nchịkọta akụkọ na nhọrọ nhazi, mmapụta mmapụta ga-adị njikere maka itinye ya n'ọrụ.
Jiri omume ndị a mgbe ị na - ekepụta ma ọ bụrụ na ị mepụta mmapụta wee hụ nke na - emegharị mma na ọnọdụ gị!
Tags: akpọ-na-emepịa popupntụgharị ntụgharịntinye mmapụtantinye popupọpụpụ ebumnucheọpụpụ ebumnuche mmapụtaọpụpụ-nzube popupmmapụta imewemmapụtagbapụtaonyinye popuppịgharịa mmapụtapịgharịa popupmmapụta ogegbadoro oge
Ugi bu onye isi na onye guzobere Ọdịnaya ụlọ ọrụ na-ere ahịa ebe ọ na-enyere ụlọ ọrụ B2B SaaS aka inweta ọkwa Google ngwa ngwa na usoro dị egwu nke ọdịnaya. Ọ nwere mmasị na SaaS na-eto eto, na-a drinkingụ biya, na-ejegharị na nkịta ya 2 Dalmatian na ịnyịnya.